सिभिल बैंकको ६१ लाख ऋण प्रकरण, सीईओले मागे माफी, दोषी कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता !
ARCHIVE, BANKING, SPECIAL » सिभिल बैंकको ६१ लाख ऋण प्रकरण, सीईओले मागे माफी, दोषी कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता !
काठमाडौँ - लिंदै नलिएको ६१ लाख ऋण तिर्न आउन तागेता गर्ने सिभिल बैंकको रबैयाप्रति बैंकका सीईओ गोविन्द गुरुङले माफी मागेका छन् । अर्थ सरोकार डटकमका सम्पादक सुरज प्याकुरेललाई फोन गर्दै बैंकका सीईओ गुरुङले भूलबस् त्यस्तो भएको हुन सक्ने भन्दै यसबाट परेको असुविधाप्रति क्षमा मागेका छन् ।
'हामीले कार्यक्रमहरु गरिरहेका हुन्छौं । पत्रकारहरुलाई पनि निमन्त्रणा पठाईएको हुन्छ । त्यहिबीचमा तपाईंकहाँ नाजानुपरने चिठी गएको र जानुपर्ने चिठी अन्तै गएको हुनसक्छ । तपाईंलाई परेको असुविधाप्रति म माफी चाहान्छु ।' उनले भने । साथै उनले चिठी पठाउने बदनियत नभएको र आन्तरिक अनुसन्धान गरी कोहि कर्मचारीको गलत नियत फेला परे तुरुन्त कारवाही गर्ने समेत बताएका छन् । 'तपाईंलाई चिठी पुग्नु भूलबस् नै भएको होला । केहि गलत नियत हुनसक्छ भन्ने तपाईंको शंकाबारे म अनुसन्धान गर्छु । केहि त्यस्तो भेटें भने त यहाँ को त्यस्तो रहेछ, म ठेगान लगाईहाल्छु नि !' उनले भने ।
साथै उनले कोहि कसैका नाममा पुग्नुपर्ने पत्र अरुकै नाममा पुग्नु बैंकको गल्ती भएको स्वीकार्दै यसलाई अन्यथा नलिन समेत आग्रह गरेका छन् । 'यसलाई अन्यथा नलिनुहोला । नापुग्नुपर्ने चिठी तपाईंकहाँ पुग्नु गल्ती भएकै हो । म सबै बुझेर तपाईंलाई खबर गर्छु ।' उनले भने ।